ပဋ္ဌာန်း (၂၄ ပစ္စည်း) | မေတ္တာရိပ်
← ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်
အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ →
ပဋ္ဌာန်း (၂၄ ပစ္စည်း)	Posted on August 10, 2009	by mettayate ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းတို့ ရဲ့အသက် လို့ ပြောရင် မှားလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး။ သာသနာကွယ်ပျောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကနေ စပြီး ကွယ်မယ်လို့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက မိန့်တော်မူပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နက်နဲခက်ခဲတဲ့အတွက် ဉာဏ်အမြင် မလိုက်နာတော့လို့ပဲ ဖြေရပါလိမ့်မယ်။
ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ၏ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်များ (၂၄ ပစ္စည်း) မန္တလေးတိုင်း မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တွင် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
Day 1 -Day2Day3-Day4-Day5ပဋ္ဌာန်း နိဒါန်း၊ ဟေတု ပစ္စယော၊ အာရမ္မဏ ပစ္စယော၊ အဓိပတိ ပစ္စယော၊ အနန္တရ ပစ္စယော။
Day6– Day 7- Day 8 -Day9– Day 10 သမနန္တရ ပစ္စယော၊ သဟဇာတ ပစ္စယော၊ အညမည ပစ္စယော၊ နိဿယ ပစ္စယော၊ ဥပနိဿပ ပစ္စယော။
Day 11 – Day 12 -Day 13 -Day 14 -Day 15 ပုရောဇာတ ပစ္စယော၊ ပစ္ဆာဇာတ ပစ္စယော၊ အာသေ၀န ပစ္စယော၊ ကမ္မ ပစ္စယော၊ ၀ိပါက ပစ္စယော။
Day 16 – Day 17 -Day 18 -Day 19 -Day 20 – အာဟာရ ပစ္စယော၊ ဣန္ဒြိယ ပစ္စယော၊ ဈာန ပစ္စယော၊ မဂ္ဂ ပစ္စယော၊ သမ္ပယုတ္တ ပစ္စယော။
Day 21 -Day 22 -Day 23 – Day 24 -Day 25 –၀ိပ္ပယုတ္တ ပစ္စယော၊ အတ္တိ ပစ္စယော၊ နိတ္တိ ပစ္စယော၊ ၀ိဂတ ပစ္စယော၊ အ၀ိဂတ ပစ္စယော။
ပဋ္ဌာန်း ပါဠိ ရွတ်ဆိုမှု (ဆရာတော်အမည်နာမ မသိလို့ မရေးပေးလိုက်ပါဘူးနော်)
အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်) ပဌာန်း၊ ပစ္စယနိဒ္ဒေယ – အနက်အဓိပ္ပါယ် PDF File
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ – အခြေပြုပဋ္ဌာန်းတရား
၂၄-ပစ္စည်း မူရင်းအနက်အဓိပ္ပါယ် (ကိုမင်းထက် ဘလောက် မှ တူးယူးတင်ထားပါသည်။)
ပဋ္ဌာန်း (၂၄) ပစ္စည်းပါဠိ၏ မူရင်းအနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ပရမတ္ထ၀ိဘာဝိနီဋီကာခေါ် မူရင်းဋီကာကျော်ပါဠိစာအုပ်မှ ရှာဖွေထုတ်နှုတ်၍ အနက်မြန်မာပြန်ဆိုဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
(၁) ဟေတုပစ္စယော- သစ်ပင်၏ရေသောက်မြစ်ကဲ့သို့ ဟိတ်ခြောက်ပါးတို့၏
(၂) အာရမ္မဏပစ္စယော- အားနည်းသူဆွဲမှီရာတောင်ဝှေးစသည်ကဲ့သို့ အာရုံခြောက်ပါးတို့၏
(၃) အဓိပတိပစ္စယော- ဆန္ဒ၊ ၀ီရိယ၊ စိတ်၊ ၀ီမံသ (ပညာ)တည်းဟူသော တရားလေးပါး
တို့၏ မိမိနှင့်စပ်၍ဖြစ်ဘက်တရားတို့ကို အကြီးအမှုးပြုသောအား
(၄) အနန္တရပစ္စယော- စိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွင်း စိတ်စေတသိက်တို့ကို ရှေ့နောက်အကြား
မရှိအောင် ပြုသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း၊
(၅) သမနန္တရပစ္စယော- ပုံသဏ္ဌာန်မရှိသဖြင့် စိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွင်း စိတ်စေတသိက်တို့ကို
(၆) သဟဇာတပစ္စယော- ဆီမီး၏ အလင်းရောင်ကဲ့သို့ အတူဖြစ်ဘက် ရုပ်နာမ်တရားတို့ကို
(၇) အညမညပစ္စယော- အချင်းချင်းထောက်မထားသော ဒုတ်သုံးချောင်းကဲ့သို့ မိမိအား
ကျေးဇူးပြုတတ်သော ရုပ်နာမ်တရားတို့ကို ပြန်လည်ထောက်မ
(၈) နိဿယပစ္စယော- အ၀တ်၊ စက္ကူစသည်သည် ပန်းချီ၏မှီရာဖြစ်သကဲ့သို့၎င်း၊ မြေကြီးသည်
သစ်ပင်တောတောင် စသည်တို့၏ မှီရာဖြစ်သကဲ့သို့၎င်း အတူဖြစ်ဘက်
(၉) ဥပနိဿယပစ္စယော- အတူဖြစ်ဘက်ရုပ်နာမ်တို့ကို အားကြီးသောမှီရာအနေအားဖြင့်
(၁၀) ပုရေဇာတပစ္စယော- မှီရာခြောက်ပါးနှင့် အာရုံခြောက်ပါးတို့၏ အကျိုးတရားမဖြစ်မီ
ရှေးဦးစွာ ဖြစ်ပေါ်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း၊
(၁၁) ပစ္ဆာဇာတပစ္စယော- လင်းတငှက်ငယ်တို့၏ အစာရနိုးမျှော်ကိုးရင်း အသက်ရှင်ရခြင်းကဲ့သို့
မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသော ကိုယ်ကို ထောက်ပံ့
(မျှော်လင့်ချက်ပေး) သောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း၊
(၁၂) အာသေ၀နပစ္စယော- ကျမ်းစာကို အဖန်တလဲလဲ လေ့လာဆည့်ပူးရခြင်းကဲ့သို့ ကုသိုလ်/
အကုသိုလ်တရားများကို အဖန်တလဲလဲ အားကောင်းအောင်
(၁၃) ကမ္မပစ္စယော- စေတနာ၏ အတူတကွဖြစ်ဖေါ်ဖြစ်ဘက်အကျိုး (၀ိပါက်)တရားများနှင့်
( ကမ္မဇ)ရုပ်တရားများကို လှုပ်ဆော်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း၊
(၁၄) ၀ိပါကပစ္စယော- မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လုံ့လမပြု ငြိမ်သက်မှုရှိသော အကျိုးဝိပါက်စိတ်
စေတသိက်တရားတို့၏ တကွဖြစ်ဘက် ရုပ်နာမ်တရားများကို
(၁၅) အာဟာရပစ္စယော- အာဟာရလေးပါးတို့၏ ရုပ်နာမ်တရားများကို ထောက်ပံကူညီသော
(၁၆) ဣန္ဒြိယပစ္စယော- ထိုထိုကိစ္စတို့၌ အကျိုး (ပစ္စယုပ္ပန်) တရားတို့ကို မိမိအလိုသို့ လိုက်စေသော
(၁၇) ဈာနပစ္စယော- အာရုံကို ကြံစည်တတ်သော ၀ိတက် စသည်တို့၏ ဆိုင်ရာအာရုံကို ကပ်၍ရှု
မှတ်ခြင်း၊ လက္ခဏာကိုကပ်၍ ရှုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကပ်ရောက်၍
(၁၈) မဂ္ဂပစ္စယော- သမ္မာဒိဋ္ဌိ (အမြင်မှန်မှု) စသည်တို့၏ သုဂတိ/ဒုဂ္ဂတိနှင့် ကောင်းမှု/
(၁၉) သမ္ပယုတ္တပစ္စယော-နာမ်တရားတို့၏ ပရမတ္ထ (အရှိသဘော) အားဖြင့် ကွဲပြားသော်လဲ
တစ်မျိုးတည်း၊ တစ်ခုတည်းကဲ့သို့ ဖြစ်ရလေအောင် အတူဖြစ်ခြင်းစ
သောယှဉ်ဘက်သဘော လက္ခဏာအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း၊
(၂၀) ၀ိပ္ပယုတ္တပစ္စယော- မှီရာရုပ်တရားများနှင့် စိတ်စေတသိက်တို့၏ အချင်းချင်းဆက်စပ်ယှဉ်တွဲနေ
သော်လဲကွဲပြားစေလျှင် မရောနှောအောင်ပြုခြင်း၊ တစ်ခုစီ၊ တစ်မျိုးစီ
(၂၁) အတ္ထိပစ္စယော- အတူဖြစ်ဘက်တရားများနှင့် ကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်သောတရားများ၏ လက်ရှိ
ပစ္စုပ္ပန်အရှိသဘောဖြင့် ယင်းသို့သဘောရှိသောတရားများကို ထောက်ပံ့
(၂၂) နတ္ထိပစ္စယော- အခြားမဲ့၌ ချုပ်ပြီးချုပ်ပြီးကုန်သော စိတ်စေတသိက်တရားတို့၏ နောက်ထပ်
(၂၃) ၀ိဂတပစ္စယော- မိမိတို့သဘောဘဘာဝနှင့် မကင်းသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရသော စိတ်စေတ
သသိက်တို့ကို ဘောသဘာဝကင်းအောင်ပြုခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်း၊
(၂၄) အ၀ိဂတပစ္စယော-အတူဖြစ်ဘက်တရား၊ ကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်သောတရားတည်းဟူသော အရှိတရား
အတ္ထိ-မုချမသွေ ရှိပါပေ၏၊ ဣတိ-ဤသို့၊ ဗောဓေနံ္တ-ကောင်းစွာထိုးထွင်း သိမြင်ခြင်းရှိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ၀န္ဒာမိ-သဒ္ဓါရိုကျိုး၊ လက်စုံမိုးကာ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏ဘုရား။
မှတ်ချက်။ ဘလော့ဂါ ဒေါက်တာကိကိသို့ အထူးရည်ညွှန်းပါသည်။ ပဋ္ဌာန်းအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိလိုကြသော အမျိုးကောင်းသား၊ အမျိုးကောင်းသမီးတို့သည် အမရပူရမဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏ “အခြေပြုပဋ္ဌာန်းတရား” စာအုပ်ကို ရှာဖွေဖတ်ကြပါကုန်။
ရုပ်ပြပဋ္ဌာန်းကိုလည်း http://plusair.blogspot.com/2009/02/blog-post_19.html မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ပိုပြီးရှင်းလင်းအောင် သိစေရန်အတွက် ၂၄ ပစ္စည်းကို ထပ်တင်ပေးထားပါတယ်။ မှ – (http://www.tarwateinthar.com/printthread.php?tid=168 )
S.S ခင်မောင်အေး ဓမ္မစေတီ (ပဋ္ဌာန်း)စာအုပ်မှ ထုတ်နုတ်တင်ပြပါသည်။
၁။ ဟေတုပစ္စယော -ဟိတ်ခြောက်ပိုင်းကြောင့် ဆိုင်ရာအကျိုးပေးခြင်း
ဟိတ်(၆)ပါး= လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ အလောဘ၊ အဒေါသ၊ အမောဟ။
၂။ အာရမ္မဏပစ္စယော= အာရုံ(၆)ပါးအပေါ်မှီ၍ ဖြစ်ရခြင်း
အာရုံ(၆)ပါး= ၁။ အဆင်း (ရူပါရုံ)
၂။ အသံ (သဒ္ဒါရုံ)
၃။ အနံ့ (ဂန္ဓာရုံ)
၄။ အရသာ (ရသာရုံ)
၅။ အထိအတွေ့ (ဖောဠဗ္ဖာရုံ)
၆။ စိတ်ခံစားမှု (ဓမ္မာရုံ)
၃။ အဓိပတိပစ္စယော – ထိပ်ဆုံး၊ အမြင့်ဆုံး က ဦးဆောင်ခြင်း(အကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ချုပ်နှင့်တူ၏။)
၁။ ဆန္ဒာဓိပတိ= အလိုဆန္ဒ အလွန်ပြင်းပြခြင်း၊
၂။ သီရိယဓိပတိ= လုံ့လစိုက်ထုတ်မှုကြီးမားခြင်း
၃။ စိတ္တာဓိပတိ= စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်လွန်းခြင်း
၄။ ဝီမံသာဓိပတိ= အသိညဏ်ပညာ ထက်မြက်အားကောင်းခြင်း
“ပြိုင်ဘက်မရှိ စကြာမင်းအောက်မှာလက်အောက်ခံမင်းများ ပြားပြားဝပ်နေရသလို
အဓိပတိစိတ်တစ်ခုသာ ခေါင်တပ်ပြီဆိုလျှငိ ကျန်စိတ်(၃)မျိုးသည် နောက်လိုက်ဖြစ်သွားကြရသည်။”
၄။ အနန္တရပစ္စယောာ = တစ်ဆတ်တည်းအကြားမရှိဖြစ်ပေါ်ခြင်း
ထိုနိယာမတရား(၅)ပါးတို့သည် ဘယ်ဖန်တီးရှင်မှ တားဆီးဖို့၊
ဖန်ဆင်းဖို့ မရနိုင်ဘဲ နိယာမတရားအတိုင်း အကြောင်းအကျိုးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်ရသည်။
သားကြီးဘုရင်ဖြစ်လာဖို့ စကြာမင်းကြီးသေပေးရသလို စိတ်အစဉ်တွေ နောက်ကဆက်တိုက်ဖြစ်ဖို့
၅။ သမနန္တရပစ္စယော = ကောင်းစွာတစ်ဆက်တည်းအတားအဆီးမရှိ
(စကြာမင်းတော ထွက်ရာ သာကြီးဘုရင်ဖြစ်သည်နှင့်တူ၏။)စကြာဝတေးမင်းသည် အရညဝါသီတောရပ်မှီသော အခါ သားကြီးရတနာမှာ တစ်ဆက်တည်းအကြားမရှိ ကောင်းစွာ ဘုရင်ဖြစ်သကဲ့သို့ စိတ်များဆက်ကာဆက်ကာ(တစ်စိတ်တည်းထင်ရလောက်အောင်)ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၆။ သဟဇတပစ္စယော= တစ်ပြိုင်နက်တည်းအတူတကွဖြစ်ပေါ်ခြင်း
(မီးထွန်းလိုက်သည် နှင့်တစ်ပြိုင်နက် မီရောင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်တူ၏။)
မီးနှင့်မီးရောင် မည်သည်ကအရင်ဖြစ်ခြင်းမရှိ။ မီးနှင့်အလင်းရောင် အတူတကွကျေးဇူးပြုသလို နာမ်ခန္ဖာလေးပါး (ဝေဒနာက္ခန္ဖာ၊ သညာက္ခန္ဖာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဖာ၊ ဝိညာဏက္ခန္ဖာ) တို့သည် အတူတကွ တစ်ပြိုင်နက်တည်းကျေးဇူးပြုကြသည်။
၇။ အညမညပစ္စယော= အချင်းချင်းအပြန်အလှန်မှီရခြင်း
နောက်တစ်ချောင်းကိုလည်း ယခင်နှစ်ချောင်းက ပြန်ပြီးထောက်ကန်ထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ပင် ရုပ်တရား၊ နာမ်တရားတို့သည်လည်းအချင်းချင်း အပြန်အလှန် အမှီသဟဲထောက်ကန်ပြီး၊ ကျေးဇူးပြုကြသည်။
(သစ်ပင်ကမြေကြီးကို မှီခို ရပ်တည်ရသည်နှင့်တူ၏။)
မြေကြီးကိုအမှီပြုပြီးပေါက်ရသလိုပဲ… ဒုစရိုက်မှု ၊သုစရိုက်မှုတို့မှာလည်း ရှေးရှေး ကအကြောင်း
တရားတွေပေါ်မှာနောက်အကျိုးအရားတွေကမှီပြီးမှ ဖြစ်ပေါ်ရသည်။
၉။ ဥမနိဿယပစ္စယော – အားကောင်းသော အကြောင်းက အကျိုးပြုခြင်း(မိုးရွာချခြင်းနှင့်တူ၏။)
မြေကြီးပေါ်မှာပေါက်ရသည့်သစ်ပင်ကို မိုးရွာချပေးခြင်းဖြင့် စိမ်းလမ်းစိုပြေစေသည်။
သဒ္ဒါတရားကိုအမှီပြုပြီး ဥပုသ်၊ သီလ၊ သမထ၊ ဘာဝနာ၊ ဝိပဿနာတွေမှတစ်ဆင့်မဂ်တရားအဘိညာဉ်တရား၊ သမာပတ်ဝင်စားမှုစသည်တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော – ရှေ့ကသည် နောက်မှကို တိုးပွားစေခြင်း(ရှေ့မှရှိနှင့်သည့်နေ၊လ နှင့်တူ၏။)
မိဘတွေက သားသမီးတွေထက် အရင်ဖြစ်နှင့်ရ၏ ။
ကမ္ဘာဦးလူသားတွေထက် နေ၊လ တို့သည် အရင်ဖြစ်ပြီးမှ သတ္တာဝါများကို အကျိုးပြုသည်။
၁၁။ ပစ္ဆာဇာတပစ္စယော – အရင်ဖြစ်နှင့်သည်ကို နောက်မှဖြစ်ရမည်ကထောက်ပံ့ခြင်း
လင်းတငှက်ကလေးများ ပေါက်ခါစမှာ လင်းတဖို၊မတို့သည် သူတို့အတွက်သာ အစာရှာကြသည်။
ကလေးတွေအတွက်လုံးဝမကျွေးပေ။ကလေးတွေက မိဘပြန်လာလျှင်စားရနိုးစားရနိုးနှင့်မျှော်လင့်နေရသည်။ သို့သော်လုံးဝမစားရရှာပေ။မစားရဝခမန်းဖြစ်နေ၏။
သူတို့လေးတွေကိုယ်တိုင် ထွက်နိုင်မှသာ အစာစားရလေ၏။
ထို့အတူ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေဖြစ်နေလျှင် ရုပ်တွေလန်းဆန်းနေရသည်။
၁၂။ အာသေဝနပစ္စယော –
အရှးရှေးက သင်ယူတတ်မြောက်ထားခဲ့သည့်စာပေကျမ်းဂန်တွေသည် နောက်နောင်မှသင်ယူရသည့်ကျမ်းစာတို့ကို ထောက်ပံ့စေပြီး အခြေခံရစေပါသည်။
ယခင်ကကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်တရားတွေသည်နောက်နှပြုသည့် ကုသိုလ်၊အကုသိုလ် တရားတို့ကိုကျေးဇူးပြုနိုင်ပေသည်။
၁၃။ ကမ္မပစ္စယော – စီရင်ခြင်း၊ မျိုးစေ့ဖြစ်ခြင်း(မျိုးစေ့မှ သစ်ပင်များပေါက်ခြင်းနှင့်တူ၏။)
အစေ့၊ အညွန့်၊ အခက်၊ ပင်စည်၊ အမြစ် စသည့်မျုးစေ့များမှ ရေမြေတို့၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် သစ်ပင်များပေါက်လာကြရသကဲ့သို့ ကုသိုလ် ၊ အကုသိုလ် ကံမျိုးစေ့တို့ကြောင့်နိဗ္ခာန်မရမချင်းဘဝဆက်ဆက်မှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေးကြသည်။
၁၄။ ဝိပါကပစ္စယော – အကျိုးရလဒ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း(အေးချမ်းသည့်လေပြေလေညှင်းနှင့်တူ၏။)
ပြာလဲ့လဲ့ကောင်းကင်ပြင်မှ လေပြေလေညှင်း၊ လေနုလေအေး တိုက်ခတ်နေစဉ် သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာစွာ ခိုနားနေရသကဲ့သို့ လူချမ်းသာဘုံ၊ နတ်စည်းစိမ်ဘုံလည်းခံစားရမည်။
အကုသိုလ် ကံပြုခဲ့မိပါက အကုသိုလ်အကျိုးနှိင့် ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်…တို့ကိုခံစားရမည်။
၁၅။ အာဟာရပစ္စယော – ထောက်ကန်ခိုင်ခံ့စေခြင်း
ထောက်ကန်ထားသည့်ကျား(ထောက်) တွေသာ မရှိဘူးဆိုရင် လေဒဏ်၊မိုးဒဏ်ကြောင့်တချိန်ချိန်မှာပြိုလဲသွားနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့ပင် သတ္တဝါတွေမှာရုပ်အာဟာရ၊ နာမ်အာဟာရ သာမရရှိနိုင်လျှင် အသက်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၁၆။ ဣန္ဒြိယပစ္စယော –
ပညာရေးဝန်ကြီး၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးစသည့်တို့သည်မိမိဌာနကို မိမိအပိုင်အစိုးရခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ စက္ခုနြေ္ဒ၊ သောတိနြေ္ဒ…စသည်ဖြင့်ဣနြေ္ဒ(၂၂) ပါးတို့သည်သူ့နေရာနှင့်သူ အပြည့်အဝတာဝန်ယူရသည်။
၁၇။ ဈာနပစ္စယော – အာရုံတစ်ခုထဲမှာ တစ်ခုခုကို စူးစူးစိုက်စိုက် ရှုမှတ်နေခြင်း
( ဈာန် နှင့်တူ၏။ )
သို့သော် များသောအားဖြင့် ဈာန် ဟုပြောလိုက်သည်နှင့် မြေလျှိုးမိုးပျံ ဖန်ဆင်းတတ်သော အတတ်ပညာဟု မျက်စိထဲ အတွေးထဲမြင်ယောင်တတ်ကြ၏။
အမှန်မှာ ၄င်းကို အဘိဥာဏ်ဟုခေါ်ပါသည်။ အရပ်သုံးအနေနဲ့ ဈာန်ပျံသည်ဟု ပြောကြပါသည်။ အမှန်မှာ ယခုဆိုလိုသော ဈာအောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင် ရှုခင်းတွေ သာသာယာယာတွေ့ရမယ်။ ရေကန်၊ ဥယျာဉ်၊ လယ်ကွင်း၊ ကျောင်း၊ ကန်၊ ဇရပ် စသည်ဖြင့် သာယာလှပသော မြင်ကွင်းကျယ်ကို တွေ့ရမယ်။ အမြင့်သို့ပိုရောက်လေ သာယာသော ရှုမျှော်ခင်းကို ပိုမိုတွေ့ရလေ ဖြစ်သလို ကုသိုလ်ဈာန် ငါးပါးကို စူးစူးစိုက်စိုက် ရှုသူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း အမြင်တွေကြည်လင်သန့်ရှင်းကာ နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်အထိ ရရှိနိုင်ပြီး ချမ်းသာသုခကို ရရှိနိုင်ကြောင်း ဟု အဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်။နပစ္စယော တွင်ပါရှိသော ဈာန်၏ ဆိုလိုရင်းမှာ တောင်ထိပ်ကနေ
ကုသိုလ်ဈာန် အင်္ဂါငါးပါး တို့မှာ —
( ၁ ) ၀ိတက် = ကြံစည်ခြင်း။
( ၂ ) ၀ိစာရ = သုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်း။
( ၃ ) ပီတိ = နှစ်သက် အားရခြင်း။
( ၄ ) သုခ = အာရုံရဲ့ အရသာကို ခံစားခြင်း။
( ၅ ) ဧကဂ္ဂတာ = စိတ်ကို စူးစူးစိုက်စိုက် စွဲစွဲမြဲမြဲထားခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈။ မဂ္ဂပစ္စယော – အကောင်းအဆိုး လမ်းနှစ်သွယ်ကို သိခြင်း။
မဂ္ဂ ဆိုတာ လမ်းခရီးကို ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းဆိုသည်မှာ ကောင်းသော ခရီးလမ်းနဲ့ မကောင်းသောခရီးလမ်းဟူပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ကောင်းသော ဘုံဌာန နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်သော လမ်းကို သမ္မာမဂ္ဂင် ဟုခေါ်ပါတယ်။ ယုတ်နိမ့်အောက်ကျတဲ့ ဘုံဌာနတွေကို ရောက်အောင်ပို့တဲ့ လမ်းကိုတော့ မိစ္စာမဂ္ဂင် ဟုခေါ်ပါတယ်။
သမ္မာမဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ကတော့ —
( ၁ ) သမ္မာဒိဌိ = ကောင်းသောအမြင်၊ ကောင်းသောအယူ၊ ကောင်းသော
( ၂ ) သမ္မာသင်္ကပ္ပ = ကောင်းသော အကြံအစည်။
( ၃ ) သမ္မာဝါစာ = အပစ်ကင်းသော စကားကို ပြောဆိုခြင်း။
( ၄ ) သမ္မာကမ္မန္တ= ကောင်းသော အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း။
( ၅ ) သမ္မာအာဇီဝ = အပြစ်ကင်းသော အသက်မွေးခြင်း။
( ၆ ) သမ္မာဝါယာမ = ကောင်းသော အားထုတ်ခြင်း။
( ၇ ) သမ္မာသတိ = ကောင်းသော အမှတ်ရခြင်း။
( ၈ ) သမ္မာသမာဓိ = ကောင်းသော တည်ကြည်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉။ သမ္ပယုတ္တပစ္စယော = (၄-မျိုးပေါင်းစပ်ထားသည့် စတုမဓူနှင့်တူ၏။)
နှမ်းဆီ၊ ထောပတ်၊ ပျားရည်၊ သကာရည်ရောစပ်ထားသောကြောင့် ရသာတစ်မျိုးစီ၏ သတ္တိများ
ထို့အတူ စိတ်၊ ဖဿ၊ စေဒနာ၊ သညာ စသည့် စေတသိက်တွေသည် တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုစီခွဲခြားမရနိုင်အောင်နှီးနှောနေကြသည်။
၂၀။ ဝိပ္ပယုတ္တပစ္စယော = ရောနှောသော်လည်း မယှဉ်ပဲသတ္တိပြခြင်း (ရသာ(၆)ပါးနှင့်တူ၏။ )
ချို ၊ ချဉ် ၊ စပ် ၊ ဖန် ၊ ခါး စသည့် ရသာ(၆)ပါးရောထားသော်လည်း သူ့အရာသာနှင့်သူ သတ္တိပြကြ၏။ ရသာ(၆)ပါးကွဲပြားနေကြ၏။
ထို့အတူ ပဋ္ဋိသန္ဓေစိတ်၊ ကမ္မဇရုပ်၊ ကလာပ်သူံးစည်း စသည့်တရားတွေသည် သူ့သတ္တိနှင့်သူ သတ္တိပြကြ၏။
၂၂။ နတ္ထိပစ္စယော = မရှိမှ ကျေးဇူးပြုခြင်း (ဆီမီးငြိမ်းသွားသဖြင့် မှောင်ကြသွားသည်နှင့်တူ၏။)
ဆီမီးအလင်းရောင်ငြိမ်းသွားခါမှ အမှောင်က လွမ်းမိုးသွားသကဲ့သို့
ှုဥပါဒ်၊ ဌီ၊ ဘင် ဆိုသည့်ခဏငယ်သုံးချက်လုံးဝမရှိမှ နတ္ထိပစည်းက ကျေးဇူးပြုစေသည်။
၂၃။ ဝိဂတပစ္စယော = ကင်းမဲ့ချုပ်ပျောက်သွားခြင်း (နေရောင်ပျောက်ပြီး လရောင် ရောက်လာခြင်းနှင့်တူ၏။)
နေရောင်ကွယ်မှ လရောင်လင်းနိုင်သကဲ့သို့ ထေင်ရှားစွာရှိပြီး ကျေးဇူးပြုခြင်း (မြင့်မားသည့်တောင်ကြီးနှင့်တူ၏။)
မြင့်မားသည့် တောင်ကြီးတွေကြောင့် သစ်တောများစိမ်းလမ်းစိုပြေရသည်။
အစာအဟာရတွေပြည့်ဝနေခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုစေသလို
သဟဇာသတ္ထိ၊ ပုရေဇာသတ္ထိ၊ ပစ္ဆာတတ္ထိ၊ အာဟာရတ္ထိ၊ ရူပဇီဝိတိန္ဒြိယတ္ထိ ငါးပါးစသည့် ပစ္စည်းတရားတို့ရှိနေသည့် အတွက်အကြာင်းအကျိုးကျေးဇူးပြုကြသည်။
ရှးစိတ်၊ စေတသိက်တွေ ကင်းချုပ်ပျောက်ကွယ်သွားမှသာ နောက်စိတ် စေတသိက်တွေ ရောက်လာနိုင်သည်။
၂၄။ အဝိဂတပစ္စယော = ကင်းပျောက်မသွားခြင်း (မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးမှာရှိကြသည့် ရေသတ္တဝါများနှင့်တူ၏။)
ပင်လယ်သတ္တဝါတို့မှာ မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးကို မှီခိုနေရမှုကြောင့် ပီတိသောမနဿတွေ တိုးပွားနေရသော်လည်း သတ္တဝါတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားလျှင် သမုဒ္ဒရာရေက ကျေးဇူးမပြုနိုင်တော့ပေ။
ထို့အတူ ဥပါဒ်၊ ဌီ၊ ဘင် ခဏငယ်သုံးချက်တို့ ချုပ်ခါနီးထိကျေးဇူးပြုနိုင်းကြောင်း…စသည့်တို့ကို သဗ္ဗညုတညဏ်တော်ရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက သိမြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပေသည်။
(ကျမ လေ့လာတွေ့မိသလောက် စုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း တခြားဆရာတော်တွေရဲ့တရားတော်များရှိရင်လည်း မျှဝေပေးစေလိုပါကြောင်း မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ရှင်။)
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းများဖြင့် ဘေးရန်ကြောင့်ကြ ကင်းဝေးကြပါစေ။
This entry was posted in တရားတော်များ and tagged ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်). Bookmark the permalink.	← ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်
7 Responses to ပဋ္ဌာန်း (၂၄ ပစ္စည်း)
Thu Sandar Aung says:	June 25, 2012 at 1:04 am	ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလရဲ့Day3– အာရမ္မဏ ပစ္စယော ဒေါင်းလို့မရတော့ဘူး ။ပြန်တင်ပေးလို့ရရင် ပြန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။မွန်မြတ်သောတရားအလှူအတွက်
Reply	Nay Ko Oo says:	July 15, 2012 at 5:57 am	တချို့ ဖိုင်တွေ မီဒီယာ ဖိုင်းယား မှာ ပျက်နေပါတယ် ခင်ဗျာ။ ပြန်တင်လို့ ရရင် တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
Reply	mettayate says:	July 17, 2012 at 5:57 am	ကျမရဲ့ ဓမ္မဆိုဒ်ကို ကြိုးစားပြီး ပြန် update လုပ်ပေးပါ့မယ်. အလုပ်မအားတာရော၊ ကျန်းမာရေးရော အင်တာနက်ပါ မကောင်းတာကြောင့် ကြန့်ကြာနေရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ မေတ္တာရိပ်ဓမ္မဆိုဒ်ကို လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက် မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားရေအေးကို လူအများရင်ထဲရောက်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်ပါ. သတ္တ၀ါများအားလုံး အစဉ်အေးမြပါစေသား…။။။။
Reply	PPK says:	July 26, 2012 at 8:33 am	ပဋ္ဌာန်းကျမ်းအကျယ် down လို့ရမယ်နေရာရှိရင် သိချင်ပါတယ်….
Reply	mettayate says:	August 10, 2012 at 8:36 am	ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ၏ ၂၄ ရက် ပဋ္ဌာန်း Links များကို update လုပ်ပြီးပါပြီ။ အားလုံးပဲ လိုသလို download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက Mediafire မှာ Free upload လုပ်ထားခဲ့တဲ့အတွက် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲ Valid ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကြိုးစားပြီးး နောက်ထပ် ထပ်ပြီး တင်ပေးသွားပါမယ်။ ကျမရဲ့မေတ္တာရိပ်ဆိုဒ်ကို ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်Technical ပိုင်းမှာ အားနည်းတဲ့အတွက် အကူအညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း အကြံပေးစေချင်ပါတယ်။ ပဋ္ဌာန်းအကျယ်ကို တင်ပေးထားတာတော့ ခုချိန်ထိတော့ မတွေ့မိသေးပါဘူးရှင်။
အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာ အငြိမ်းဓါတ် ကိန်းဝပ်စေပြီး အများကိုလည်း မျှဝေနိုင်ပါစေ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply	ထွန်းနိုင်ဝင်း says:	August 18, 2012 at 11:52 pm	ကျေးဇူးကြီးစွာတင်ပါသည်
Reply	than htut says:	September 23, 2013 at 4:42 am	ဒီနေ့မှဝင်ကြည့်မိတယ် လေ့လာစရာတွေအများကြီးပါပဲ အသိပညာတို့ရဲ့ တခါးပေါက်ပဲ ဒီလိုတင်ပေးကြသူများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။